Iprojekthi yoncedo entsha yeLufthansa iThemba eKapa izakukhula nangakumbi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo » Iprojekthi yoncedo entsha yeLufthansa iThemba eKapa izakukhula nangakumbi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Education • Amalungelo abantu • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Iprojekthi yoncedo entsha yeLufthansa iThemba eKapa izakukhula nangakumbi.
Ukusukela ngo-2019, intsebenziswano eyomeleleyo yomanyano loncedo, i-Mastercard kunye ne “RTL-Sinceda abantwana” ibisebenzisana nosaziwayo uBeatrice Egli ukunika abantwana basezilokishini ukufikelela kwimfundo esemgangathweni kwaye ngaloo ndlela babakhulule kubuhlwempu, intswela-ngqesho ulwaphulo-mthetho.
Imanyano yoncedo yintsika engundoqo yokuzibophelela kweQela leLufthansa kwezentlalo.
Njengenkampani esebenza kumazwe ngamazwe kunye nenxalenye yoluntu lwaseJamani nolwamazwe ngamazwe, iQela leLufthansa lithatha uxanduva lwemicelimngeni yangoku yezentlalo ngaphaya kwemisebenzi yalo yokwenyani yoshishino.
Inkampani engenzi nzuzo yamatyala enyiniweyo ixhasa iiprojekthi ezininzi kwihlabathi jikelele ezibonelela abantu abancinci ngakumbi ukufikelela kwimfundo kwaye zibenze baphile ubomi bokuzimela.
ncedisana nomanyano, umbutho woncedo we Iqela leLufthansa, kunye ne-Mastercard bajonge kuMgqatso weRTL walo nyaka, oza kubanjwa ngoNovemba 18 no-19, 2021. Ababukeli banokunikela ukususela ngomso kwiprojekthi yoncedo ehlangeneyo “Imfundo yabantwana beklasi yokuqala yodidi lokuqala lwabantwana” elokishini. kwi Capricorn Kapa, eMzantsi Afrika, kwaye ngaloo ndlela kuxhaswe ulwakhiwo lwesikolo samabanga aphantsi iThemba esitsha.
Ukusukela ngo-2019, intsebenziswano eyomeleleyo ye ncedisana nomanyano, Mastercard kunye ne "RTL - Sinceda abantwana" ibisebenzisana nosaziwayo uBeatrice Egli ukunika abantwana basezilokishini ukufikelela kwimfundo esemgangathweni kwaye ngaloo ndlela bakhulule kubuhlwempu, intswelo-ngqesho nolwaphulo-mthetho. Ukuze abona bantwana bancinane bafunde ngokukhawuleza kunye nabantwana besikolo samabanga aphantsi, iprojekthi edityanelweyo ngoku iyandiswa: ngeminikelo yeRTL Donation Marathon yalo nyaka, isakhiwo esitsha sesikolo sabasaqalayo ngoku siza kwakhiwa emabaleni. kwisikolo samabanga aphantsi iThemba.
“Ngeprojekthi yethu, sifuna ukuzisa ithemba (“iThemba” ngesiZulu) kubomi babantwana – ngokufikelela kwimfundo esemgangathweni yabantwana abasaqalayo kwabona bantwana baselokishini. Imfuneko yeendawo zezikolo zabantwana abasaqalayo iphezulu kakhulu apho, yiyo loo nto isikolo sabasaqalayo (pre-school) kwindawo esele sikhona sele sifikelele kumda waso wezakhono. Ngenkxaso ye-“RTL – Sinceda abantwana” kunye ne-Mastercard, kuyakwenzeka ukuba kwakhiwe isakhiwo esitsha sesikolo sabantwana abasaqalayo kwaye ngaloo ndlela senze imfundo yabantwana ikwazi ukufikelela kwi-140 yabantwana abahlelelekileyo,” utshilo uSusanne French, uLufthansa Purser, ibhodi yeengcebiso yomanyano. ilungu kunye nevolontiya lomququzeleli weprojekthi iThemba.
UPeter Bakenecker, uMongameli waseMbindi Yurophu e-Mastercard, ukwajonge phambili kwiprojekthi edibeneyo elandelayo kwaye uchulumancile kukuba ukwanda kwesikolo samabanga aphantsi, esaqalwa ngo-2019, kugqitywe ngempumelelo kweli hlobo ngaphandle kwemiqobo yeCorona: “Inyaniso yokuba umsebenzi wolwakhiwo kwiSikolo iThemba Prayimari ugqitywe kwangexesha nangona iimeko ezinzima zibonisa ukuba ungakanani na ukuqhubela phambili namandla okwenziwa kumsebenzi wesiza. Sonke sivuyiswa ngakumbi ukuqhubeka siyinxalenye yeprojekthi edibeneyo kwaye ngaloo ndlela sidale indawo yokuzimela kunye nembono yabancinci ".
Iprojekthi yezemfundo iThemba kwi Kapa yasekwa kwiminyaka eli-15 eyadlulayo kunye ne-iThemba Pre School njengesikolo sabantwana abasaqalayo kunye nesikolo sabasaqalayo ukubonelela ngamathuba emfundo kubantwana abahlelelekileyo abaphuma kwiintsapho ezihlelelekileyo ngokwentlalo. Isikolo sabantwana abasaqalayo besisoloko sigxininise kwindlela yokujonga izinto zonke kwaye sifundisa izakhono zentlalo ukongeza kwizifundo zeMathematika kunye nesiNgesi. Ubomi besikolo bemihla ngemihla nokufunda kunye kufundisa intsebenziswano enentlonipho kwaye kunempembelelo entle ebantwaneni nakwindawo abahlala kuyo. Iyuro nganye enikezelweyo kuMbatho weRTL Womnikelo uya kufikelela ekuphunyezweni kwesakhiwo esitsha sesikolo sabasaqalayo ngaphandle kokutsalwa kwesenti, ukuze kwixesha elizayo abantwana besikolo sabasaqalayo nabesikolo saseprayimari eCapricorn babe nako ukufunda kumhlaba omnye.